Inkqubo yokutywinwa kwefuthe lokufudumala kunye ne-heater high frequency
Ikhaya / izicelo / Ukutshisa ukunyuka / Induction Ukutywina Ubushushu
Udidi: Ukutshisa ukunyuka tags: Ukufudumeza ukutywina, Ukufudumeza rhoqo ukutywina, isantya esiphezulu sokutywina, ukutywina ukutywinwa, Ukwenza ukufudumeza ukutywina, Inkqubo yokutywina, Ukutshisa ukufudumeza
Ukukhangela Ukutywina Ukutywinwa Ngezixhobo zokusebenza zokuHulela iiFree frequency
Ukutshisa ukutshisa linikeza indlela enhle yokutywinwa kwe-aluminium engaphezulu kwimijelo yokutya. I Ukukhupha Ukutshisa ukutywinwa Indlela yokupakisha iqinisekisa ukukhuseleka, ukukhusela, ukucoceka nokugcinwa kwemveliso. Ukufudumeza ukutshisa kwefilimu ye-aluminium kwandisa ubushushu beemveliso ezifakwe kwisalathisi somnxeba odibeneyo kunye negalelo. Olu bushushu luhlanganiswe noxinzelelo olwenziwe kwiphepha le-0.5 kwi-1.5. Le nqubo isetyenziswe kuzo zonke iimoko zeebhotile kunye nobuninzi bezinto eziphathekayo, kubandakanywa: ilayila, ikhadibhodi kunye neeplastiki (PE, PP, PVC ...).
Kuzo zonke iimeko akukho nxu lumano phakathi kwe-inductor kunye nekhava. Ukongezelela kule nzuzo, zikho izizathu ezininzi zokuba le ndlela entsha isetyenziswa kakhulu:
■ Ukushisa kuveliswa kwiphepha ngokwalo
kufuphi ukusondeza phezu kwendawo. I
Inkqubo yenziwe lula kwaye iingxaki
idibene nokutshiswa komxhatshazo
Uthintelo lweentloko zokutywinwa ziphephelwa.
■ Indlela yokutywinwa kokushisa ukusetyenziswa kokusasaza ingasetyenziselwa isetyhula, i-oval,
isikwere, ingxande okanye ezinye iimo
■ I-generator frequency generator isenziwa
usebenzisa amaqumrhu aseburhulumenteni abomeleleyo kwaye akanalo
iinxalenye ezinokuthi zigqoke ngexesha lokutywinwa kweshushu.
Sinika iintlobo ezininzi Ukukhangela Ukutywina Ukutywinwa iinkqubo:
■ Inye-nyathelo lokutshatyalaliswa kokushisa ukutywinwa.
■ Ukufudumala kokutshitshiswa kobushushu ngaphambi kokufakwa kwesikhala.
■ Ukutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa kokutshiza ngaphambi kokufakwa kwesikhala.
Induction Ukufudumeza izitya iiReactors